Culimada oo musharixiinta ugu baaqay in ay iska dhowraan balan-qaadyo been ah (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 28, 2013 5:52 b 0
Garoowe, December 28, 2013 – Culima?Awdiinka Puntland ayaa caawo soo gabagabeeyay Nadwo diini ah oo muddo 5 habeen ah ka socotay masjidul Xaaji Cali ? Garowe . Nadwadaan ayaa looga? hadlayay ilaalinta danaha umadda iyo dowlad wanaaga.
Gabagabadeedii ayaa lagasoo saaray bayaan baaq ah oo taabanayay dhinacyo badan.
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم Bayaanka gunaanadka nadwa xilliyeedda labaad ee magaalada Garoowe ?Ilaalinta danaha Ummadda? Mahad oo idil Allaah baa iska leh nabgelyo iyo ammaan nabigeennii Muxammad ahaa, eheladiisii, asxaabtiisii, atbaacdoodii iyo intii wanaag ku raacda tan iyo qiyaamaha dushooda ha ahaato. Hordhac Waxaa masjidka Xaaji Cali ee magaalada Garoowe lagu qabtay? nadwo socotay intii u dhaxaysay 24-28/12/2013 .
Nadwadan ayaa ah mid ay culumadu qabtaan markasta oo ay doorasho ka dhacayso geyiga Puntland, waana tii labaad oo nooceeda ah oo lagu qabto magaalada Garoowe. Waxaa nadwadan soo qaban qaabisay si wanaagsanna usoo agaasintay? Mu?asasada Al- Minhaaj ee dacwada iyo horumarinta, oo si joogta ah u qabata adeegyo wax ku ool u ah bulshada, qabatana siminaarro, muxaadaraat iyo nadwooyin la xiriira baahida diimeed ee dadka iyo dalkaba. Ujeeddada nadwadan 1.
Ujeeddooyinka nadwadan waxaa ugu horreeya gudashada xilka weyn ee Ilaahay culimada ka saaray bayaaninta xaqa iyo u naseexeynta iyo u tilmaamidda bulshada sida ay ku gaari karaan guul adduun iyo badbaado aakhiro.
3. In loogu nasteexeeyo cid walba oo rabta in ay ummadda xil u qabato loona tilmaamo mas?uuliyadda iyo amaanada culus ee ay holliyeen.
1. Intaa ka dib waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaynaa arrimahan soo socda:- Bulshada Soomaaliyeed 1) Waxaan bulshadeenna Soomaaliyeed ugu baaqeynaa inaan Ilaahay ka xishoonno, ilaalinno soohdimaha ay diintu inoo dhigtay iyo inaan ogaanno inuu Ilaahay diinta galiyay sharafteenna adduun iyo badbaadadeenna aakhiro, wanaag aan iyada lagu helinna aan meel kale laga dooneyn.
4) Waxaan bulshada xasuusineynaa sidii ay isugu gurmadeen xilligii duufaantu ku dhufatay Puntland iy fatahaaddii wabiga ee shabeellada dhexe ay astaan cad u tahay in wax wada qabsi oo kaliya? lagu gaari karo waxa naga maqan.
Musharraxiinta jagada madaxweynenimada Puntland 5) Waxaan ugu baaqeynaa ragga ku loolamaya hoggaanka dowladda Puntland in ay Ilaahay ka cabsadaan, una tartamaan si xilkasnimo, hufnaan iyo mas?uuliyad leh, bulshadana tusaan hindise siyaasadeed oo u qalma hanka ummadda, hab-dhaqan wanaagsan oo ay ku kasbadaan kalsoonida iyo inay bulshada u muujinaya inay u qalmaan hoggaanka dalka.
6)?? Waxaan musharraxiinta xasuusineynaa in dalku yahay koodii, dadkuna yahay kuwii ay doonayeen inay xukumaan, sidaa darteed looga baahan yahay inay bulshada u muujiyaan inay u maqan yihiin ee aysan ku maqneyn, u daneynayaan ee aysan ku daneysaneyn, u damqanayaan ee aysan dulmineyn.
7) Waxaan murashaxiinta ogeysiineynaa in qiimaha doorashadu aysan joogin dagaal, laaluush iyo wax is dabamarin ee ay joogto? kalsooni, sidaa darteed looga baahan yahay in ay ku mashquulaan sidii ay ku kasban lahaayeen kalsoonida bulshada iyo xubnaha ay u wakiilatay inay codkeeda matalaan.
9) Waxaan uga digeynaa murashaxiinta inay isu adeegsadaan? dicaayado iyo wax iska sheeg been abuur ah iyagoo ka dhiganaya xeelad ay ku sumcad dilaan murashaxa la tartamaya.
10) Waxaan murashaxiinta ugu baaqeynaa inay ilaaliyaan wixii lagu heshiiyay ee go?aanno ah iyo xeerarka nidaam ee dalka u yaal diintana aan ka hor imaaneyn, siiyayna xuquuqda ay isku soo sharraxeen, kana soo baxaan waajibaadka saaran, xuquuqdoodana ku doontaan si sharaf, hufnaan iyo dhowrsooni leh.
13) Waxaan murashaxiinta xasuusineynaa in waxa loo tartamayo ay tahay hal jago, taasoo qaadda hal nin oo kaliya sidaa darteed kii la dooran waayo waa uuin natiijada soo baxda ogolaado, si lamid sidii uu jeclaan lahaa in loo ogolaado haddii uu isaga ahaan lahaa murashaxa la doortay. Isimmada
15) Waxaan isimmada ugu baaqeynaa inay xoojiyaan isku duubnidooda, kana dheeraadaan wax kasta oo dhaawacaya midnimadooda, muujinayana is heysi iyo loollan dhexdooda ah, gaar ahaan soo xulidda xubnaha baarlamaanka iyo inay iska ilaaliyaan inay la kala saftaan? murashaxiinta madaxweynenimada ee ay marjica u yihiin,? arrimahaas oo meel kadhac ku ah sumcaddooda iyo kalsoonidii soo jireenka aheyd ee lagu qabay.?? Xubnaha cusub ee golaha baarlmaanka
16) Waxaan ugu baaqeynaa xubnaha baarlamaanka in ay ilaaliyaan amaanadii ay Ilaahay hortiis u qaadeen ummadda, kuna dhaarteen inay daacad ka???? noqonayaan, ayna xasuusnaadaan hadalkii Ilaahay ee ahaa:? إن اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرون ﺑﻌﮭدﷲ وأﯾﻣﺎﻧﮭم ﺛﻣﻧﺎ ﻗﻠﯾﻼ أوﻟﺋك ﻻ ﺧﻼق ﻟﮭم ﻓﻲ اﻵﺧرة وﻻ ﯾﻛﻠﻣﮭم ﷲ وﻻ ﯾﻧظر إﻟﯾﮭم ﯾوم 77 اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﻻ ﯾزﻛﯾﮭم وﻟﮭم ﻋذاب أﻟﯾم .آل ﻋﻣران
17) Waxaan ugu baaqeynaa? inay maslaxadda guud ka hormariyaan maslaxadaha gaar ahaaneed, ayna ka digtoonaadaan inay qaaddo eex ama hunguri, aakhiradoodana dhaafsadaan adduunyada qof kale.?? 18) Waxaan mudanayaasha baarlamaanka ugu baqeynaa inay soo xulaan sida Ilaahay ku og yahay qofka ay ku jirto danta, diinta, dadka iyo dalka.
19) Guddiga xallinta khilaafaadka waxaan xasuusineynaa inay Ilaahay hortiis ku qaadeen amaano iyo xil ummadeed, sidaa darteed ay waajib ku tahay inay sida ugu wanaagsan u gutaan, annagoo xasuusineyna in loo xushay inay wax xalliyaan ee aan laga fileyn inay mas?uuliyadda la saaray wax ku halleeyaan.
20) Waxaan ugu baaqeynaa murashaxa kusoo baxa doorashada xilka madaxweynenimadada? in uu dalka cadaalad ku dhaqo ilaaliyana diinta, iyo masaalixda dadka iyo dalka, kana shaqeeyo isu soo dhoweynta, walaaleynta iyo mideynta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto.
4? 21) Waxaan ugu baaqeynaa in uu ilaaliyo ballanta amaanada iyo xilka Alle hortii? kaga aaddan iyo kan bulshada labadaba.
Ilaahay ayaa mahad leh ay galladdiisu wanaagyadu ka ebyoomaan
5 Culimada bayaanka saxiixday 1) Sh. Daahir Aw-Cabdi Aw-Yuusuf 2) Sh. Axmed-Daahir Xasan Xuseen 3) Sh. C/Naasir X. Axmed Maxamed 4) Sh. Maxamuud X. Yuusuf Maxamed 5) Sh. Maxamed M. Axmed Xuseen 6) Sh. Axmed Yuusuf Daad 7) Sh. Axmed C/Samad Cabdille 8) Sh. C/Qani Qorane Maxamed 9) Sh. Maxamed Maxamuud Ciise 10) Sh. C/Salaam Maxamuud Cartan 11) Sh. Mukhtaar Axmed Faarax 12) Sh. Yaasiin C/Laahi Cali 13) Sh. Maxamed Cali Axmed 14) Sh. Dalmar Guureeye Kaarshe 15) Sh. Cabdi Xirsi Cali .
Dhegeyso: – Bayaanka Culimada oo akhrinayo sheikh Cabdiqani Qorane